Fandriana ambony lamba any an-trano Yongsheng, mpamokatra fandriana mainty, fandrianana roa | Tianda
Ampiasao fandriana fandriana mpanjaka ao Yongsheng hamoronana paradisa toy ny toerana fihemorana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny vidiny mirary. Tsipika namboarina tamim-pitandremana, fonosana bokotra tsy manam-paharoa, fizarana elatra kanto ary fehiloha lohan-doha roa sosona no manome ity fandriana feno rihana ity ilay endrika manankarena sy maoderina tadiavinao hatrizay. Fa tena tsara tarehy ve ny fandriana lehibe an'i Yongsheng? Ny endriny avo lenta dia mora vidy. Farany, safidy mora vidy ho an'ireo manana ny tsirony lafo vidy izy io. Ny fandriana amin'ny ondana dia lava sy mahafinaritra, mafana sy feno.
Akanjo farafara volomparasy volom-borona ahazoana aina manampy endrika maoderina ho an'ny tomponao., Azo ampidirina mora foana amin'ny tranonao ity lakozia ity. Tianay ny fomba hanampian'ny accents ny lohan'ny fantsika amin'ny firaisana tsikombakomba.
Ny fandriana fandriana an-trano any Yongsheng dia mitondra rendrika ao amin'ny efitranonao. Ity fandriana mahatalanjona ity dia misy saron-doha vita amin'ny volon'ondry vita amin'ny volon'ondry misy fehezam-boninkazo sy fefy bokotra. Ny mainty lamaody dia hifanaraka amin'ny fomba rehetra amin'ny efitrano. Tsy te halahelo an'ity hatsarana maoderina ity ianao!
Ny kidoro sy ny kidoro fototra / lohataona dia misy ary amidy mitokana.
Miaraka amin'ny tsipika tsotra, tongotra misokatra tsy manam-paharoa ary lohan-doha miloko chic, io farafara goavambe io dia manana ny mariky ny taonjato faha-12.
· Misy takelaka, dian-tongotra, lalamby ary tohotra
Atitany vita amin'ny hoditra vita amin'ny mainty
Kitapo miverina miendrika elatra miaraka amina lohany pin
Tongotra hazo miharihary
Ny fandriana dia tsy mila fandriana fototra / lohataona
· Kidoro azo, amidy misaraka
Tombana amin'ny fotoam-pivoriana: 60 minitra
134 lbs. (60,78 kgs.)
• Sakany: 69,50 "
• halalin'ny: 86.88 "
• Haavony: 55,50 "
• Haavo azo ovaina (min): 49,50 "
• Haavo azo ovaina (max): 55,50 "
• Farafara nofonosin'ny mpanjakavavy voahosotra Sakany: 69,50 "
• Fandriana mihosin-tampona ny mpanjakavavy voangona: 86.88 "
• Farafara nohomboan'ny mpanjakavavy avo haavo: 55,50 "
• Sakany amin'ny loha: 69,50 "
• halalin'ny loha: 4.00 "
• Haavon'ny loha: 55,50 "
• Sakan'ny takelaka: 63.00 "
• halalin'ny Footboard: 1,75 "
• Haavon'ny takelaka: 10.88 "
• Sakan'ny lalamby: 61.25 "
• Fiakarana mankany amin'ny gorodona: 4.75 "
Famintinana PDF Famaranana ny fifanarahana
29 Desambra 2020 Jinan Mingchang head manufacturing Co., Ltd.
Manaraka: Fandriana fandriana an-trano any Yongsheng